Eliyinjubaqa yodongwe Sagger idla ngokuba nkulu ize isetyenziswe ukukhusela okanye iimveliso inkxaso ngexesha badubula, umzekelo glost okanye Biscuit zokudubula of tableware, okanye umgubo calcination, njl Ezi mveliso ingenziwa semi-owomileyo sikuxinile, iplastiki ngokucindezela, eziwisela .
Saggars Round: Round okanye saggars elimbhoxo.
Saggars Square: Square, eziziingxande, okanye ezinye saggars ezilula-ezimise.
Saggars eziZodwa: Saggars ngeemilo ezintsonkothileyo.
Corundum Mullite eliyinjubaqa sagger yodongwe yetreyi Clay Iziko Factory for weziko eliyinjubaqa kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye unobuhlobo igama elihle emarikeni. Xngtailong lushwankathela iziphene yeemveliso elidlulileyo iyaqhuba ukuphucula kuzo. Incazelo ye Corundum Mullite eliyinjubaqa sagger yodongwe yetreyi Clay Iziko Factory for eliyinjubaqa weziko ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Oku kumenza imveliso abasebenzisi esuka imvakalelo manzi kwaye benxila ebusuku ukususela ezifunxa yayo laphu nokufuma kude elithile.
1. Yintoni na impahla eqhelekileyo?
Kumazwe iphakheji standard okanye package eyodwa ngokwemfuneko umthengi.
2. Yintoni na MOQ?
Akukho mda ukuba ubuninzi. Sinako ukunikela isindululo zibhetele izisombululo njengoko imeko yakho.
3. Ngubani ixesha delivery?
iintsuku ezisi-7 zomsebenzi yeemveliso eqhelekileyo iintsuku ezingama-30 ukwenzela iimveliso elungelelanisiweyo.
1. Price: iimveliso zethu thelekisa kakuhle kunye nabanye abarhwebi.
2. Group: Thina iqela lethu ukuze uphando, uyilo, imveliso kunye wathengisa.
3. Umgangatho: Siye kudlule IS0 9001: 2005. standard, ezinzile, ethembekileyo
4. Imbali: Thina inkampani kudityaniswe R&D, imveliso, kunye neentengiso ngokupheleleyo,
Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd. lasekwa ngo-1997, ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, mveliso umlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel. Iimveliso asetyenziswa uhlalutyo elinqabileyo metal, uvavanyo laboratory kwemigodi, akukulinga izimbiwa, kunye akukulinga negolide. Umlilo kulingwa crucibles eziphathekayo nto fireclay axutywe nezinye izinto elinjubaqa, bakwazi ukumelana ubushushu ukuya ku 1300 ℃. Baye ukumelana elihle ekuhlaselweni wampompoza, ukhukhuliseko, ngokuhlaziya, kunye nokothuka thermal. Njengomvelisi enamandla ngobuchule lomlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel, kufuneka isakhiwo 7000 square metres ezintsha mveliso kunye umgca wemveliso oluzenzekelayo. Le nkampani usoloko ibambelela ukusinda umgangatho, izinto ezintsha, kunye nophuhliso, isidima lophawu, ukukhusela kunye namashishini abacingayo inkonzo yasemva intengiso njengoko njongo. Ukutyhubela iminyaka, iimveliso zethu wathengisa kakuhle kulo lonke eli lizwe kwaye zithunyelwa eJamani, eUnited States, Brazil, Russia, Mexico ... kumazwe angaphezu kwama-20, umgangatho imveliso, kunye nenkonzo banconywa kakhulu ngabathengi. "Superior umgangatho, ixabiso preferential" na imfundiso yolawulo wethu. thina ngokunyanisekileyo silindele ukuba basebenzisane kunye kwinginginya kubathengi basekhaya amazwe, uphuhliso eqhelekileyo! Wamkelekile ukuba batyelele kwaye baphande wenkampani yethu.
Phezulu alumina saggar, corundum saggar, cordierite mullite saggar ezisetyenziswa kakhulu ezahlukeneyo yodongwe, iglasi, elektroniki, imichiza, ferrite kushishino mqengqeleki eontini, etoneleni eontini, isiphekepheke eontini, atyhale ipleyiti weziko, yaye omnye kilns mveliso. njengefama oxide sintering wemagniziyam, zirconia, umhlaba ezinqabileyo, Ithatyathwe emigutyeni yonke ezahlukeneyo, grafayithi umgubo, kunye carbon.
>1,95 g / cm3
amandla Flexural at 20 ℃:
amandla Flexural ngo 1250 ℃:
Ukwandiswa kwe-Inded kwi-20-1000 ℃
2.1 10- 1K-1
Ubushushu obuthile kwi-20 ℃
I-1kj / kgk
Ubushushu obuninzi bokusebenza
1. Ukuxhathisa kobushushu obuphezulu.
2. Uzinzo olomeleleyo lothusayo.
3. Ukuxhathisa ukuvela kunye nokuhlukumeza.
4. Ubomi obude bokusebenza.
5. Ukunciphisa ngokufanelekileyo ithuba lokusebenza kwemveliso, i-Slag Slag.
I-7000 yeemitha zendibano
1. Siza kubonelela ngokuthe ngqo kwaye sisebenza ngokukuko kwaye sikhonze ngokwemizobo yabathengi.
2. Sineqela le-QC le-QC ukuqinisekisa ukuba imveliso yakho ilunge ngakumbi.
3. Jonga izinto ezingafunekiyo ngaphambi kokuqala kwemveliso.
4. Yiba novavanyo olungenamkhethe ngexesha lokuqhubekisa.
5. Uvavanyo lobomi lokusebenza ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngokusekwe kulandelelwano olungqongqo kwi-ISO9001 okanye uMgangatho weShishini okanye omnye uMgangatho weHlabathi, iinjineli zethu zokuhlola ziqhuba umkhondo ngokupheleleyo kwimveliso yonke.
I-Q1: Ngaba uyinkampani yokuthengisa okanye umvelisi?
Q2: Ngaba ubonelela ngeesampulu?
A: Ewe, iisampulu kwi-ntlawulo yasimahla.
Q3. Ngaba ungayivelisa ngokweesampuli?
A: Ewe, sinokuvelisa ziisampulu zakho okanye imizobo yezobugcisa. Singakha iimbumbulu
I-Q4. Ngaba uyayivavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuhanjiswa?
A: Ewe, sinovavanyo lwe-100% ngaphambi kokuziswa iiyure ezintathu.
I-Q5. Inkonzo yokuthengisa emva kwentengiso
A: Ukuba ufumana nayiphi na imveliso eyaphukileyo ngobungakanani bomsindo, siya kubuyisela kwakhona okanye sibuyisele imali ngqo kwaye sinike isaphulelo kwi-odolo elandelayo.
I-Boron Nitrode deide goramic rod, ekwabizwa ngokuba yigrafu emhlophe, inolwakhiwo olufanayo negrafu. Inobuqili oluhle lombane, ukuqhubela phambili kobushushu, ukuxhathisa okuqinisekileyo kwengozi kunye nokuzinza kwemichiza.I-hexagonal ye-hexagonal icinezelweyo ye-hexagonal boron wimide ye-ceramic iimveliso ze-ceramic, zibonisa indibaniselwano eyodwa yekhemikhali, zombane, zombane kunye ne-thermal, zinokubonelela ngococeko oluphezulu lwemizi-mveliso.Silinge Isisombululo esekwe kwiindidi zabathengi becandelo.